Kedu otu esi echekwa igwe igwe gantry? - Dongguan Tuoyuan nkenke Machinery Co. LTD.
Kedu otu esi echekwa igwe igwe gantry?
Nchedo nkịtị nke igwe igwe gantry dịkwa ezigbo mkpa. Ọtụtụ nsogbu ndị a na-enwekarị na-akpata site n'ileghara nchebe nkịtị anya. Ọ bụrụ na ejiri igwe gantry igwe mee ihe dịka nduzi ọrụ sayensị na iwu nchekwa na iwu, ọ nwere ike igbochi ọtụtụ Na-agbaghara, belata ọghọm akụ na ụba.
Ndinam igwe gantry na-egwe ihe bụ ụdị ihe eji arụ ọrụ na ngwa ngwa akpaaka, usoro ọgbaghara na ọnụ ahịa dị oke ọnụ. Ọ na-arụ ọrụ na-enweghị njedebe na mmepụta ụlọ ọrụ nke oge a. Iji nye egwuregwu zuru oke maka ịdị irè nke CNC gantry milling machine processing, nchebe na ndozi nke ngwa ọrụ igwe kwesịrị ime. Ọ dị ezigbo mkpa iji belata ntụpọ ntụpọ nke nhazi igwe gantry igwe gantry
Ihe odide niile nke igwe ihe eji eme ihe na-emeputa ihe. Oghere gantry nwere ogidi abụọ, ogidi, njikọ njikọta, elu elu, mkpuchi elu na ebulu isi iji mepụta ihe siri ike. Iberibe ndu-ishi-ozi ono eshije l'ọnu-ọguzo, eeshije abahụ l'ọnu-abata. High-ike multi-ọrụ ebule-ụdị na-agwụ ike na-egwe ọka isi. Na-agwụ ike ma na-egwe ọka isi slide na-akpali tinyere doo okporo ígwè nduzi na-akpali elu na ala. Ọdịdị nke gantry na-agagharị ogologo oge n'akụkụ akwa.
Mgbe ị na-arụ ọrụ igwe igwe, onye ọrụ kwesịrị ịghọta ụkpụrụ nke akụrụngwa igwe eji. Dị ka ike nke spindle ụgbọala moto, nso nke spindle ọsọ, ndepụta ọnụego, ọrịa strok nso nke akụrụngwa akụrụngwa, ebu ikike nke worktable, kacha ngwá ọrụ size na kacha ngwá ọrụ mma kwere site ATC. Ọ dịkwa mkpa ịghọta ọnọdụ nke ọkọlọtọ mmanụ ọ bụla na ụdị akara eji eji ire ụtọ eme ihe.
Tụkwasị na nke a, debe gburugburu ebe obibi igwe dị ọcha, na igwe na-egwe ọka ga-ewepụsị ájá mgbe niile iji gbochie ikuku ikuku dị jụụ ka ọ ghara ịdị ọcha, na-eme ka ọnọdụ okpomọkụ dị na kabinet CNC dị oke elu ma usoro ahụ enweghị ike ịrụ ọrụ kwesịrị. Mbadamba sekit na ihe eletriki na kọmpụta eletrik kwesịkwara ịbụ ntụ ntụ mgbe niile iji hụ na ọrụ nke usoro eletriki kwesịrị.
Ọdịnihu mmepe nke CNC gantry milling